I-China CR Foam Tape mveliso kunye nabenzi | Iqanda
Iphepha le-foam enamathelayo
Iteyiphu yePolyethylene (PE)
Iteyiphu yePolyester (PET)
Iteyiphu yeGwebu yePE
Iteyiphu yeC foam Fo
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL02
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL05
Ukuncamathelisa irabha yeChloroprene
I-CR (i-Chloroprene Rubber) yi-elastomer ene-chlorobutadiene njengezona zinto ziphambili ze-α-polymerization, inyibilike kwi-toluene, i-xylene, i-dichloroethane, i-vanadium ethylene ezintathu. Inokunyibilika kancinci kwi-acetone, i-methyl ethyl ketone, i-ethyl acetate, i-cyclohexane，Ngelixa i-insoluble in n-hexane, solvent naphtha, kodwa inokunyibilika kwisinyibilikisi esixubileyo ngokwenani elifanelekileyo lokulungileyo, elihlwempuzekileyo nelinganyibilikiyo, okanye elihlwempuzekileyo nelinganyangekiyo.
● Idatha yeTekhnoloji
Ukuxinana (Kg / m3)
N20N / cm
Uluhlu lobubanzi: 10-1600mm
Ubude beLanga: 100-2000mm
（QAPHELA：La maxabiso angentla ngamaxabiso aphakathi afunyenwe yinkampani yethu ngokweemvavanyo ezifanelekileyo.）
Iigwebu ze-CR zinokuxhathisa kweoyile，ukunxiba okuphezulu ukumelana，ukumelana nobushushu kunye namandla okuncamathela. Ukongeza, ikwanakho nokumelana namanzi, ukuqina komoya kunye neepropathi zokudibanisa ezibalaseleyo, ukudodobala kwelangatye kukwangcono.Kusetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni iimveliso zerabha ezinganyangekiyo ezahlukeneyo, iintlobo ngeentlobo zeefaskthi ezinganyangekiyo ngeoyile, iigasketi, imikhono, ukupakisha okuguqukayo, irabha ethambileyo Ithumbu, ukuprinta kunye nokudaya indawo, izinto zerabha zekhebula, njl., kwifriji ikakhulu isetyenziselwa ukulungisa ukujika kwezinto. Zonke iimveliso ziyahambelana neemfuno zokusingqongileyo zeRoHS.
● Ukupakisha izinto zesixhobo
● Ukutywinwa ngokudibeneyo kolwakhiwo
● Ukuxinana kwetreyini / ukothuka emotweni kunye nokutywinwa
● Isimo somoya / ifriji / ifriji ayikwazi ukumelana nobushushu
● Ukulungisa umatshini wefreyim yokuhlaziya
● Ukugcinwa kunye nokuSebenza
Ukugcinwa kwigumbi lethutyana. ngeRH 20% -80%. Ubomi beShelf: iinyanga ezi-3-6 emva kweMFD.
Ngoku, sibonelela ngobuchule kubathengi ngeemveliso zethu eziphambili Kwaye ishishini lethu ayisiyiyo "ukuthenga" kunye "nokuthengisa" kuphela, kodwa kugxila kokunye. Sijolise ekubeni ngumthengisi wakho othembekileyo kunye nomsetyenzana wexesha elide e-China. Ngoku, sinethemba lokuba ngabahlobo kunye nawe.
Egqithileyo Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL01 Okulandelayo: Iteyiphu yeGwebu yePE
Iphindwe kabini i-FOAM ADHESIVE